Nongedzo dzeMinamato Yekudzivirira Kwevana Vedu Uye Kununurwa | NZIRA DZOKUNAMATA
musha Pfungwa dzemunamato 30 Yekunamata Points YeKuchengetedzwa Kwevana Vedu Uye Kununurwa
30 Yekunamata Points YeKuchengetedzwa Kwevana Vedu Uye Kununurwa
10 Hapana chakaipa chingakuwira, Uye hapana hosha ichaswedera paunogara.
Nhasi tiri kutarisa paminamato makumi matatu yekuchengetedzwa kwevana vedu uye kununurwa. Sevabereki, kukosha kwekunamatira iyo kuchengetedzwa wevana vedu haambofi akaomeserwa. Vana vedu vanoda minamato yedu zvino kupfuura nakare kose. Isu tinofanirwa kugara takumikidza vana vedu kunaIshe nguva dzose sekukura kwavo mumazuva ano ekupedzisira. Uipi huri munyika nhasi hwasvika pamusoro, uye hwahwa izera idiki. Vazhinji vana vanojoinha bhendi rezvivi apo vanokura kuva vechidiki uye vakuru vechidiki. Isu sevabereki tinofanirwa kuziva kuti hatikwanisi kushandura vana vedu nesimba redu, tinoda kupindira kwaMwari muhupenyu hwevana vedu uye nzira yega yekuwana hunhu hwaMwari ndeyekunamata.
Munamato uyu unonongedzera kuchengetedzwa kwevana vedu uye kununurwa achaparadza matenga ese evavengi kuti atungamire vana vedu. Izvo zvichavabatsira kukunda zvivi zvinodzora vana vezera ravo. Sezvo isu tichavanamatira mweya mutsvene uchavapa simba rekuti vasiye zvakaipa uye nzira! Ehe hongu kuna Jesu. Patinenge tichiita minamato iyi, yedu vana havazove vanotambudzwa nevezera rako. Ivo havazonyengererwe naDhiabhori, pachinzvimbo ivo vanozozviwana ivo muna Mwari. Ndinokukurudzira kuti unamate munamato uyu nekutenda, uye kutarisira chishamiso paunonamata muzita raJesu.
1. Baba, maita basa kune vana nhaka uye mubairo wenyu muzita raJesu.
2. Baba, ndinofukidza vana vangu neropa raJesu
3. Baba, kuraira nhanho dzevana vangu vese munzira yakanaka muhupenyu muzita raJesu
4. Baba, Mutumwa waIshe ngaagare akachengetedza vana vangu kubva munjodzi muzita raJesu
5. Baba, ita kuti hungwaru hwako hugare pavana Vangu muzita raJesu
6. Baba, vasungei sahwira wenyu akasungwa anozivikanwa saPaul muzita raJesu.
7. Shandisa vana vangu zvine simba kune chinangwa chako chikuru muzita raJesu
8. Baba, musatungamira vana vangu mumuyedzo asi muvaunure pazvakaipa zvese muzita raJesu
9. Baba, ndinoparadzanisa vana vangu pazvinhu zvese zvisina umwari zvaJesu
10. Baba, ngoni dzenyu ngadzikunde kutonga muhupenyu hwevana vangu muzita raJesu.
11. Baba nunura vana vangu kubva kuzvitadzo muzita raJesu.
12. Baba, ndinonamata kuti ruponeso rwevana vangu vese, ita ipapo mugwara kusvika Jesu awana muzita raJesu
13. Baba, ndinokonzera nyonganiso pakati pevana vangu pamwe nechero simba raSatani mune iro hupenyu muzita raJesu.
14. Baba, kana mwana wangu ari satanic kufurira vamwe vana, muparadzanise kubva kuvana vasina mhosva uye muuye naye kwandiri muzita raJesu.
15. Baba nunura mwana wangu kubva kuhumbwa
16. Baba nunura mwana wangu kubva paupombwe
17. Baba nunura mwana wangu kubva kuba
18. Baba nunura mwana wangu kubva pakuputa
19. Baba nunura mwana wangu kubva mukureva nhema.
20. Baba nunura mwana wangu kubva pakupindwa muropa nezvinodhaka
21. Baba nunura mwana wangu kubva kunonyadzisira
22. Baba nunura mwana wangu kubva kune yakaipa kambani
23. Baba nunura mwana wangu kubva kunamato
24. Baba nunura mwana wangu pakusateerera
25. Baba nunura mwana wangu kubva kuusimbe
26. Baba nunura mwana wangu kubva pakunyengera kwakaipa
27. Baba nunura mwana wangu paruoko rwevavengi
28. Baba nunura mwana wangu kubva kunhare dzasatani
29. Baba, ndiitei anodada nevana vangu muzita raJesu
30. Baba, budirirai vana vangu uye muite kuti izadziso inoitika mamuri muzita raJesu
Baba ndinokutendai nekupindura minamato yangu.
Previous nyayaMaminitsi makumi matatu Emunamato Kune Vacheche Mune Womb
inotevera100 Kununurwa Munamato Kumiririra Rufu uye Kuparadza
Njere chiko Gumiguru 25, 2020 Pa 1: 03 am
Kutenda nemunamato une simba
Khulekani Tshuma May 26, 2021 Pa 12: 37 am
Ndatenda munhu waMwari. Vashandi vane simba
Maminitsi 50 Emunamato Pokana Kutuka Uye Kunyara